Indlela ukufaka Windows imishini 7 inethiwekhi umshayeli
Uma sicabangela umsebenzi adaptha inethiwekhi, Wi-Fi module noma router, abasebenzisi okusebenza izinhlelo Windows kungase ubhekana nesimo lapho imishini enjalo iyeke isebenze ngenxa yokuhluleka noma faka uhlelo lonke. Ubani sizodingida indlela ukufaka umshayeli inethiwekhi ku-Windows 7. Kulokhu, kafushane iveza amaphuzu ayinhloko ukufakwa kanye ukucushwa okwalandela.
Indlela ukufaka Windows 7 umshayeli Iseluleki Sokufaka Iphrinta Yenethiwekhi ngokuzenzakalelayo
Okokuqala, ningatatazeli. "Ukuhlangana" abashayeli, njengalapho lapho uphinde ufake i-"OSes" ayikhona isimo esibucayi.
Qaphela ukuthi kule nqubo ye kokufaka futhi ukumisa uhlelo ke cishe zonke ezaziwayo amadivayisi namuhla, kuhlanganise inethiwekhi adapters nempahla ehlobene, ukufakwa umshayeli engcono (software ukusebenza yabo lesifanele) ngokuzenzakalelayo. uqobo inkinga, indlela yokufaka i-Windows 7 abashayeli yalezi amadivaysi, kuyehla kuphela yokuthi lo Linda inqubo reinstallation nokusetha kokuqala. Nokho, ngemva ikhompyutha iqala ekupheleni inqubo, kwezinye izimo, i-database umshayeli ayikwazi elise kwi-hard drive yakho, futhi kwi-Windows ukufakwa CD.
Ukusebenzisa update umshayeli
Uma nganoma isiphi isizathu umshayeli imishini ayifakiwe kahle, kufanele uqale ngena "Isiphathi sedivayisi", okuthiwa kusukela ejwayelekile "Control Panel" uma ngempela imishini akusebenzi (ohlwini kuboniswa umbuthano ophuzi).
Ungenza indlela elula: kusuka kwimenyu yokuqukethwe esetshenziswa ngqo ayale Update Driver noma ukuya Properties kwesigaba, ukhethe lapho inkinobho esihambelanayo (lokho kusebenza kuwo wonke izinhlelo, kuhlanganise ngisho XP).
Uhlelo abayofuna umshayeli engcono nokubika ukufakwa yayo ngempumelelo noma uyonika isexwayiso sokuthi umshayeli isivele ifakiwe. Kodwa umshayeli engcono kuvamise kungabi isixazululo esingcono kakhulu. Ngakho-ke, kufanele usebenzise ezihlukahlukene izindawo, kusuka lapho ukufakwa kuzokwenziwa.
Kuyinto kulokhu-Windows ukufakwa disc Ukugunda. Nokho, isibonelo, uma umsebenzisi akanakho ukubhekana ekwi-desktop yekhompuyutha kanye ne-laptop, ukuxazulula inkinga, kanjani ukufaka umshayeli kukhompuyutha ephathekayo (lwe-Windows 7), udinga ukusebenzisa umshayeli disk ekhethekile, okuyinto ngempela ukwethula uma uthenga idivayisi. Uyaqonda ukuthi, ngokungafani edeskithophu, ngesandla abelethwe, notebook inikeza ukumisa ejwayelekile kwabakhiqizi alishintshi lapho ukudayiswa.
Kukhona nje ifakwe disc idrayivu optical, abese elinika indawo oyifunayo uma ucela ohlelweni umshayeli isifaki.
Ukususa idivayisi kusukela ohlelweni bese ufaka
Uma lokhu othile hhayi wanelisa, umbuzo kanjani ukufaka Windows 7 Iseluleki Sokufaka Iphrinta Yenethiwekhi umshayeli, futhi ingaxazululwa ngokususa idivayisi kusukela ohlelweni.
Uma ufaka i-Windows qala kabusha ukuhlonza ngokuzenzakalelayo kudivayisi, ngemva kwalokho-ke sizokwazi ukusebenzisa indlela original umshayeli disk.
Kodwa kungenziwa ngesandla. Kuyadingeka ukubuka namafolda zitholakala on esiphathiswa optical, futhi phumani lapho kwifolda nge imishini afanele umshayeli ekhethekile ukufakwa ifayela (ngokuvamile amafayela ne .inf isandiso). Yifake ohlelweni, ungakwazi ukuvula imenyu yengqikithi (chofoza ngakwesokudla) futhi usebenzisa umyalo isethaphu.
Indlela ukufaka umshayeli-Wi-Fi i-Windows 7
Ngokuqondene amamojuli esakhelwe engenawaya imizila, isimiso, lutho kuyinkimbinkimbi mayelana kokufaka abashayeli cha.
Ngokusekelwe kulokhu okungenhla, kungenzeka ukusebenzisa zonke izindlela ezichazwe, kodwa njengoba umthetho, i-Wi-Fi modules kunqunywe ngokuzenzakalela uhlelo, futhi imizila abashayeli ingatholakala abezindaba elikulesi sihloko optical. Inqubo yokufaka akahlukile standard. Enye into, uma ufuna ukulungisa imishini ukwenza kube zingasebenzi kahle.
Ukusetha i-router, Wi-Fi kanye LAN uxhumano
Ukuze imizila usebenzisa ukufinyelela izilungiselelo ifomu engena isiphequluli nge 192.168.1.1 ikheli noma 192.168.0.1 (kuye ngokuthi model - ikheli enjalo zingatholakala ku ilebula ohlangothini ngemuva router, kukhona - login nephasiwedi), lapho bonke nemingcele olunikezwa ISP.
Lapho yonke imisebenzi eyenziwa kuhlanganisiwe-Wi-Fi module izocacisa khona kunethiwekhi engenantambo, yebo, uma nje i-pre-ukufakwa uxhumano olusha lwenziwe. I module uqobo icushiwe ngokuzenzakalelayo. Uma ivaliwe, vula kungaba inhlanganisela inkinobho FN kwenye okhiye umsebenzi. Ngokwesibonelo, ku-Fujitsu amanothibhuku iyona FN + F5. I module uthatha iphasiwedi ngemvume, uma kufanele, abese ukuxhuma.
By endleleni, ukuthi ikhebuli ukuthi Kunconywa kuzilungiselelo TCP / IP ukuze ucacise othomathikhi ikheli reception uxhumano olungenantambo. Nokho, uma kuziwa zokuxhumana yezinkampani, kube kuhle kakhulu ukuthi ezinye nemingcele kufanele wangena ngesandla. Ungazenza kusukela ngumlawuli wesistimu yakho.
Ekuphetheni uhlala ukusho ukuthi umbuzo kanjani ukufaka Windows 7 abashayeli amadivayisi kunethiwekhi, ngokuvamile, ukuxazulula lutho nzima singamelwe. Ukuze edeskithophu kungenziwa kuphawulwe kuphela nenkinga uma uhlelo has amaningi inethiwekhi abalawuli, okungase kubangele ukushayisana hardware. Ngaphezu kwalokho, uma ngempela akudingeki disk yami yangempela nabashayeli ungathola umkhiqizo we imishini kanye nemikhiqizo yayo, bese usebenzisa enye ikhompuyutha exhunywe kwi-Inthanethi, yiya ku esemthethweni umakhi indawo futhi ulande inguqulo yakamuva ye umshayeli esekelwe ayemisa "OSes" (e indaba yethu - Windows 7, 32 noma 64 izingcezu).
Uhlolojikelele emisha EL Capitan OS X: ukubuyekezwa abanikazi
Indlela ukushintsha wefonti "Android": igxathu negxathu Umhlahlandlela
Indlela ukukhubaza firewall?
Indlela ukufometha idrayivu kanzima ngokusebenzisa BIOS?
Indlela ukwandisa ukusebenza laptop ukuze Windows 7 i-yokugembula?
Indlela ukususa amafayela asusiwe. Indlela yokususa yimaphi amafayela engadingekile laptop
Indlela ukunqoba indoda: amathiphu ambalwa alula
Yini i AGV-boilers, yini izinzuzo zabo kanye nebubi?
Recipe Ukupheka ubhontshisi obomvu cuisine Caucasian
Ukhukhamba ethosiwe - Ungadla elungisiwe ngesitayela Oriental
Mbumbulu wokwakha ngezandla zabo. Indlela hang lodonga mbumbulu akhiwe
PU impahla yesimanje: kuyini?
Unkosikazi Adriano Celentano - UClaudia Mori
Lavanga Resort & Spa 5 * (Sri Lanka, Hikkaduwa): incazelo ehhotela, ukubuyekezwa. Amaholide e Sri Lanka
Ogwini best Sochi. Holiday ngo Sochi
Yini ukutshela inhlokodolobha Montenegro